Enyo enyo ụlọ, ihe eji achọ mma nke ukwuu. Icho mma
Maria onyekwere | 29/09/2021 10:00 | Emezu
Mgbidi gị ọ tọgbọ chakoo na ị maghị etu esi achọ ya mma? Enyo enyo mgbidi bụ nnukwu ngwaọrụ iji mee nke a. Ọ bụghị naanị ga -enyere aka igosipụta ọkụ.
Enyo enyo dị mkpa na ime ụlọ ịsa ahụ yana ọ bara uru na ime ụlọ na ọbụlagodi n'ime ụlọ nzukọ iji tinye ngwa ma ọ bụ dozie ntutu anyị tupu ịpụ n'ụlọ. Mana, na mgbakwunye, ha bụ a mma ji achọ mmewere mgbe a họpụtara ya nke ọma. Ọ bụkwa na ụdị enyo ọ bụla anyị na -ekwu maka ya taa ga -enye ụlọ gị ụdị dị iche.
1 Gịnị mere ị ga -eji jiri enyo chọọ mgbidi ahụ mma?
2 Ụdị enyo enyo
2.1 Na osisi ma ọ bụ achara
2.2 Gburugburu, ụdị nke pere mpe
2.3 Omenala karịrị akarị
2.4 Enyo Venetian
2.5 Ntọala sitere n'ike mmụọ nsọ
Gịnị mere ị ga -eji jiri enyo chọọ mgbidi ahụ mma?
Anyị nwere ọtụtụ ụzọ iji chọọ mgbidi mma, yabụ kedu ihe ị ga -ahọrọ enyo ma ọ bụ setịpụrụ enyo iji mee ya? Enwere ma ihe eji eme ihe na ihe eji achọ mma iji tinye enyo eji achọ mma n'ime ụlọ. Ma ọ bụghị otu, ọ bụghị abụọ, ọ bụghị atọ ...
Jiri anya gbasaa oghere. Ịdebe enyo na ebe dị mkpa ga -enyere gị aka ị nweta oghere miri emi.
Nyere aka mee ka ìhè dị elu dịkwuo elu. Ezi ojiji nke ọkụ sitere n'okike nwere ike ibute nnukwu ego na ụgwọ ọkụ eletrik. Tụkwasị na nke a, ime ka ọkụ ọkụ dị elu ga -enyere aka mee ka oghere ime ụlọ mara mma.
Ha na -enye ohere igosipụta arịa ụlọ na nkọwa. Ị nwere otu arịa ụlọ ị chọrọ ka ọ pụta ìhè? Ihe ịchọ mma nke ịchọrọ inye ọkwá ka ukwuu? Jiri enyo mee ka o kwe omume ịhụ ya site n'akụkụ dị iche iche.
Ha bara uru inye anyi aka anyi tupu anyi hapu ulo anyi. N'ime ime ụlọ ịwụ, ime ụlọ ma ọ bụ nnukwu ọnụ ụlọ, enyo na-enye anyị ohere ịnye onwe anyị n'ihu.
Ụdị enyo enyo
E nwere ọtụtụ ụdị mgbidi n'ahịa n'ihe banyere ọdịdị, nha na ụdị ya. Otú ọ dị, taa, anyị na -elekwasị anya na ọnọdụ.
Na osisi ma ọ bụ achara
Ngwa eji ihe ndị sitere n'okike emepụtala nke ọma n'ụlọ anyị n'ime afọ iri gara aga. Ọ bụghị ihe ndabara; ha na -adịgide adịgide na mee ka ụlọ anyị bụrụ ebe na -ekpo ọkụ ma na -anabata ndị mmadụ. Anyị na -ekwu maka osisi, achara na eriri akwụkwọ nri dị ka raffia, rattan ma ọ bụ jute.
Enyo nhazi nke oge a, ahịrị dị ọcha, ụdị okirikiri na akwa osisi ma ọ bụ bamboo bụ usoro ọhụrụ iji chọọ oghere ọgbara ọhụrụ na nke pere mpe. A na-etinyekwa ha n'ụzọ zuru oke na gburugburu eke na ụdị Nordic, etinyere ya n'elu igbe, ihe njikwa ma ọ bụ tebụl mgbakwasa.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ihe ị na -achọ bụ mee ka ikuku nke ime ụlọ dị n'ime ụlọ ahụ, enyo anwụ bụ nkwa. Ndị a, yana ndị ọzọ nwere nkọwa anụ ọhịa, dị mma maka ịchọ mgbidi efu na iweta ịdị n'otu n'ime ụlọ nwere akwa jute, oche osisi ma ọ bụ nkata rattan.
Gburugburu, ụdị nke pere mpe
Enyo gbara okirikiri na -ewu ewu taa. Ndị na -enweghị okpokolo agba ma ọ bụ nwere okpokoloji nwere uche dị ka nke dị na foto a bụ ezigbo nhọrọ maka icho mma paseeji na ime ụlọ ịsa ahụ nwere agwa pere mpe. Edebere ya na otu arịa ụlọ, ha pụtara ìhè site n'ikwe ka mgbidi na -eku ume.
Enyo enyo dị okirikiri nwere ike ịragide na mgbidi. Mana ị ga -ahụkwa atụmatụ ndị ahụ kpọgidere n'agbụ, ụdọ, ma ọ bụ eriri akpụkpọ anụ. Ndị nke ikpeazụ na -atọ ụtọ nke ukwuu iji chọọ oghere ndị ịchọrọ igosipụta kwụ ọtọ ma ọ bụ nke ịchọrọ ịnye ụdị mkpụrụ osisi vintage na retro.
Omenala karịrị akarị
Nnukwu enyo ọla edo ha na -enwe ike imeju mgbidi n'onwe ha. Ha bakwara uru nke ukwuu ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịdọrọ uche gaa n'otu isi ihe, ọ bụrụ na ime ụlọ, ebe iri nri, ime ụlọ ma ọ bụ ime ụlọ ịsa ahụ. A pịrị apị, ha mara mma nke ukwuu, zuru oke maka ibipụta ọkaibe na gburugburu.
Un ime ụlọ a ma ama nwere akwa ụlọ, akwa plasta na ekwú ọkụ, bụ ntọala zuru oke iji tinye ụdị enyo a. Ọ bụkwa ihe a na -ahụkarị ka ha na -achọ nnukwu paseeji ma ọ bụ ụzọ gafere. A na -etinyekarị ha n'elu ekwú ọkụ ma ọ bụ igbe e ji osisi rụọ, nke a kwụdoro nke ọma na ya.
Enyo Venetian bụ enyo nwere ogologo akụkọ. Companieslọ ọrụ dị iche iche dabere na Murano na -aga n'ihu na -emepụta taa, dịka ha mere n'oge gara aga, enyo ndị a bụ ihe e ji amata inwe na mgbakwunye ọnwa, enyo enyo nwekwara nke a na -ejikarị ihe okooko osisi a tụrụ atụ chọọ ya mma.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye sparkle na mmetụ ịma mma Enyo ndị Venetian na -abụkarị ụzọ dị mma maka ime ụlọ ọ bụla n'ụlọ. Debe ha na akwa akwa n'ime ụlọ ezumezu, n'elu ekwú ọkụ dị n'ime ụlọ ma ọ bụ n'ime ụlọ ịsa ahụ iji tinye mmetụ vintage na ya. Gaa maka nnukwu enyo ma ọ bụ mepụta obere enyo ga -eme ka ụdị ịgbara mmanya sie ike.
Ntọala sitere n'ike mmụọ nsọ
Ntọala nke obere enyo nwere ikuku ikuku nwere nnukwu ihe ịchọ mma. Ị nwere ike jikọta ha n'ụdị na nha dị iche iche, si otú ahụ nweta ọmarịcha setịpụrụ nke ga -eji anya gbasaa oghere. Ọ dịghị mfe, mana onyonyo ndị a nwere ike kpalie gị ka esi eme ya.
Jiri ha n'ime ụlọ iri ihe yana mkpokọta ahịhịa na -eme ka ikuku ikuku ha dịghachi mma. Mepụta ọmarịcha akụkụ n'ime ime ụlọ ya na oche oche ihe mgbe ochie, tebụl akụkụ yana setịpụrụ enyo. Ma ọ bụ tinye ha n'ime mgbidi nke ụlọ iri nri ma ọ bụ n'elu sofa, na -eso ntụzịaka nke okpokoro na sofa.
Ọ na -amasị gị n'echiche nke iji enyo enyo chọọ mgbidi gị efu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Inicio » .Chọ Mma » Emezu » Enyo enyo, ihe eji achọ mma
Agba ojii dị ka ihe eji achọ mma na kichin